30/11/2018 admintriatra 0
Raha ny fenitra manerantany tokony ny iray ampahadimy ny mpisehatra amin’ny tontolon’ny fitandroana ny filaminana dia vehivavy. Toy ny firenena rehetra manerantany anefa mbola tsy voahaja izany eto Madagasikara. Olana, tsy mankatoa ny fisian’ny vehivavy …Tohiny
Fatapahan-drano : Tsy manana vahaolana ny JIRAMA
Noho ny fahatsentsenan’ny fantsona mitarika ny rano eny amin’ ny toerana avo no anton’ ny fatapahan-drano isan’andro amin’ ireo toerana ambony eto an-drenivohitra, raha ny fanazavana nentin’ ny minisitry ny Angovo omaly. Mahaloa vola ara-dalàna …Tohiny
Fokontany Manarintsoa : Jeren’ny polisy fotsiny ireo mpanendaka
Isan’ny fokontany be mpanendaka iny faritra Manarintsoa, Andavamamba sy ny manodidina iny, hatreny Antetezana afovoany isanandro. Araka ny angom-baovao teny an-toerana izao dia mirongo zava-maranitra mihitsy ireo mpanendaka rehefa hanao ny asa ratsiny. Eny amin’ny …Tohiny
Tsy takona hafenina toy ny vay an-kandrina. Izay no azo ilazana ny fomba amam-panaon’ny praiminisitra Ntsay Christian sy ireo mpikambana eo anivon’ny governemanta hatramin’ny nipetrahan’izy ireo tamin’ny toerany amin’ny maha olom-panjakana ambony azy ireo. Miha …Tohiny
Antsika i Madagasikara Hanarina sady hanorina Ny hanamafy ny fametrahana ny tany tan-dalàna no anisan’ny tanjona iray lehibe ao anatin’ny vinan’ny kandidà Jean Omer Beriziky laharana faha-19, izay natolotry ny antoko, Antsika i Madagasikara amin’izao ...Tohiny